Ilungiselela ukuvalelisa imindeni | isiZulu
Ikhihle isililo imindeni yabavukuzi - Marikana
Imindeni yabavukuzi abadutshulwa ngamaphoyisa emayini yaseMarikana, ngonyaka owedlule, badube iKhomishana kaFarlam, baphuma bahamba.
Ngabe silandela iqembu noma umholi kwi-ANC? Ngiyalazi iqembu engiyolikhetha kodwa-ke angazi noma kuyobe kungukulandela izimiso noma umholi, kuzindla uSandile Khathi.
Ilungiselela ukuvalelisa imindeni
Imibiko ehambelanayo U-Obama uhambele izisulu
Ubulale abaningi kuzobukwa i-movie
Uzogwetshwa u'Demolition Man'
Centennial - Imindeni enkantolo ibibukeka idabukile, abanye bengakwazi ukuzibamba bekhala mi izinyembezi ngesikhathi bebona umsolwa uJames Holmes, obhekene nokubulala abantu abangu-12 abadubula kubukwa ifilimu kaBatman ngoLwesihlanu.NgoLwesibili, imindeni ibilungiselela ukuvalelisa izihlobo ezabulawa nguHolmes.
Ilungu lomndeni uTom Teves ugqolozele umsolwa uHolmes, 24, sengathi uyamtadisha, ngesikhathi evele enkantolo ngoMsombuluko.Indodana kaTeves u-Alex, wazijwiba ezama ukuhlenga intombi yakhe ngesikhathi kudubula umsolwa.Abantu abangu-58 balimala.
Kuhlaselwe indawo yamayengandoda
Oshayasibhamu abangaziwa badubule babulala cishe abesifazane abayisikhombisa kanye nabesilisa abahlanu esakhiweni sabaqwayizi eBaghdad, kusho izikhulu.
Kuphume umbiko wophenyo eBangladesh
Uphenyo lukahulumeni luveze ukuthi izinga lezinsiza zokwakha ezasetshenziswa zazingupomu futhi ziphambana nemigomo yezokuphepha ebhilidini laseBangladesh.
Bafake ingane isibhamu emlonyeni bebamba inkunzi
Linbro Park - 10:42:06 AM
STATIONARY TRUCK in the centre lane after the Marlboro Drive exit